Waa sidee xaalada Isco iyo James Rodriguez ee gudaha Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 26 Juunyo 2016 Isco iyo James ayaa xiliciyaareed liita ku qaatay kooxda Real Madrid xiliciyaareedkii dhamaaday waxaana lala xiriiriyay inay katagi doonaan Real suuqa xaggaagan.
Shabakada reer Spain ee Fichajes ayaa baahisay in Isco oo diirada u saaran Juventus iyo Man City uu haatan helayo kalsoonida tababare Zidane.
Qandaraaska laacib kaan ayaa ku eg 2018, Real ayaana faa’iido ku qabta inay iska iibiso xaggaagan si ay ugu hesho lacag fiican balse tababare Zidane ayaa ka dalbanaya kubadd abuuraha reer Spain inuu saxiixo heshiis cusub.
Dhanka kale James Rodriguez ayaa dareensan in tababare Zidane uusan u soo jeedin dhankiisa sidaas darteed wuxuu qorshaynayaa inuu raadsado koox uu ka heli karo boos joogto ah.
Laacib kaan diirada u saaran Man United iyo Juventus ayaan la hubin mustaqbalkiisa Real Madrid maadama uusan diyaar u ahayn inuu fariisto kursiga kaydka xiliciyaareedka dambe.